Antananarivo: Malagasy -
Web Course: July 27-31, 2020
Web Course: August 24-28, 2020
Toronto, Canada: September 14-18, 2020 (confirmation pending)
Web Course: September 28 - October 2, 2020
Web Course: October 26-30, 2020
Bangkok Thailand: November 17-19, 2020 (confirmation pending)
View this course description in English
Voir la description du cours en Français
Midira hiasa ireo mpitsabo amin'ny indostria sy olona liana amin'ny taranja Microfin manana isa tsara indrindra eto Antananarivo, Madagasikara 24-28 Febroary 2020. Manambatra ny traikefa ara-bola, na ny fahombiazana ary ny fanamby, ny fizarana, miaraka amin'ny fandalinana tranga natao izay naharitra 25 taona lasa. traikefa ao amin'ny Indostrian'ny Microfinance.
Hampianatra amin'ny teny anglisy amin'ny fandikana frantsay ny fampianarana ity.
Microfin dia tsy havaozina tsotra fotsiny amin'ny teti-bolan'ny Microfinance Institutions, fa fitaovana fanomanana orinasa manerantany, natao hanampiana ireo mpitantana ara-bola, CFO ary tompon'andraikitra amin'ny fandaharanasa hanao drafitra ho an'ny fanitarana ny sampana, mpikarama mpiasa, fitantanana vola, ary fividianana fananana. Ankoatr'izay, ny Microfin dia ahitana fanambarana feno momba ny fitantanam-bola, tatitra momba ny salanisa, grapika ary famakafakana isan-karazany isankarazany.
Noho ny toetra feno momba ilay vakoka miparitaka dia mpampiasa maro no nihorohoro voalohany ilay rindrambaiko. Ny lalam-piofanana nataoko dia manome hery ireo mpampiasa amin'ny fanavaozana tarihin'ny Microfin, fanazavan-kevitra feno momba ny Microfin, amin'ny fampiasana fandalinana tranga momba ny raharaha sy ny dikan-tsarimihetsika farany indrindra. Ny fiheverana sy ny valiny dia hazavaina sy arahana amin'ny fomba lozika, manaisotra izany fampitahorana voalohany izany ary manome toky ny mpampiasa azy fa afaka manatanteraka Microfin, valin'ny tetikasa ary mandray fanapahan-kevitra ampahalalana ho an'ny MFI manokana izy ireo.
Mbola hotanterahina GRAND HOTEL URBAN; Làlana Tsiombikibo; Ambatonakanga Antananarivo; 101 MADAGASCAR 1.6 - 3.2 kilometatra ao afovoan-tanànan'i Antananarivo, izay ao anatin'ny elanelan'ny kolontsaina, fizahan-tany ary fiantsenana.
Ny saram-pianarana dia miankina amin'ny haingana ahafahanao miantoka ny fahatongavanao:
Ho an'ireo manolo-tena hanatrika ny 10 Janoary 2020 dia mitentina $ 1,050 ny vidiny
Ho an'ireo manokan-tena amin'ny 31 Janoary 2020 dia mitentina $ 1,200 ny vidiny
Ho an'ireo manolo-tena hanatrika aorian'ny 1 Febroary 2020 dia mitentina $ 1,350 ny vidiny
Misy fihenam-bidy marobe amin'ny $ 100 isaky ny solontena.
Sakafo atoandro ary fiatoana kafe / dite / kitapo.
Misoratra anarana amin'ny famenoana ny fisoratana anarana eto: frantsay anglisy
Ity no fotoana voalohany natolotra teto Madagasikara ary faly aho fa miaraka aminao amin'ny Febroary 2020.